Tsy araka ny vava ny atao | NewsMada
Tsy araka ny vava ny atao
Tsy mahalala sa tsy te hahalala ny olan’ny vahoaka ny mpitondra? Na miezaka amin’ny famahana izany… Na farafaharatsiny mihaino sy mifampidinika any ifotony: inona ny maika, ny (h)atao? Na miara-mihafy aminy ahay…
Tsy misy tsy mampiaka-peo ny sehatra rehetra, fa tsy arakaraka ny vava ny atao sy ny tena zava-misy. Na olom-pirenena tsotra io, na firaisamonina sivily, na mpanao politika, na fiangonana, na sehatra iraisam-pirenena…
Inona no afitsoky ny mpitondra? Raha milaza fandriampahalemana, ohatra: izay hampilamina ny toerana hatramin’ny fifidianana, taona 2018? Raha hoe fanarenam-pirenena, izay hampandroso ny akaiky sy ny antoko… ?
Raha milaza fahafahana, fangejana no mby ao an-tsaina… Toy izany hatrany? Mifanohitra amin’izay lazaina ny atao. Tsy mifankahazo ny resaka, tsy ifampitokisana ny atao. Tsy mahagaga izao tsy fitoniana izao, fa… Aoka re e!